I-China China Ngenisa kunye noThengiso oluThunyelwayo (i-Canton Fair) Umthengisi weWebhusayithi umthengisi weWebhusayithi nabaxhasi | Iqela leHongihai Holding
IiTrhasi zoMthwalo wePetrol
Amanqanaba abakhweli egesi
Amaxesha okuhamba kwabahambi
Izikhuselo zabantu abadala
Iinqwelo zeMandla eNtsha
Icandelo leeMoto zokuHamba
I-China Ngenisa kunye noThengiso oluThunyelwayo (i-Canton Fair) Iwebhusayithi yomthengi oMbonisayo oMiselweyo
Inkampani yethu, Iqela leHongihai Holding ngumenzi okhokelayo ngaphakathi ushishino lwezithuthi ezincinciKule minyaka ingama-44 idlulileyo sigcina ukubonelela ngezisombululo zokuhamba kubantu abakubudala obahlukeneyo, iiklasi kunye nezizwe. Kwaye kwakudala, sikhathalele indlela yokwenza abantu abadala baqhube ngokukhuselekileyo nangokukhuselekileyo. Leyo sisihloko sethu namhlanje.
Kule mihla ukwaluphala kwabantu kuba yingxaki enkulu kwihlabathi liphela. Ngokophando olusuka kwi-intanethi, ngonyaka ka-2018, inani labemi abangaphezulu kweminyaka engama-65 ubudala bali-8.5% yabemi belizwe liphela. Kwaye kulindeleke ukuba ngonyaka ka-2050, eli nani lenyuke liye kwi-17%. EYurophu kwayeamantla Emelika, kuya kuba ngaphezulu kwe-25% yabantu ngaphezulu kweminyaka engama-65, oko kuthetha ukuba kubo bonke abantu abane onokuhlangana nabo "umntu omdala".Uluhlu lweListCanton Fair kwi-intanethi
Inani labantu abalupheleyo litshintshe ubomi bethu bemihla ngemihla kwaye lizisa iingxaki ezininzi ezinxulumene noko. Kumazwe amaninzi, iilayisensi zokuqhuba ziya kurhoxiswa kubantu abangaphezulu kweminyaka engama-65 ubudala ukuba abaludlulanga kuvavanyo lonyaka. Kwaye kuyingozi kubantu abadala ukuqhuba isithuthuthu okanye isithuthuthu soMbane endleleni, kwaye malunga nokuhamba kawonke wonke ixesha elininzi akulungelanga konke. Ke yintloko yabantu abadala ukuba baphume. Kwesi siseko, sifuna ithemba ukubonelela ngezisombululo zethu. Sicebisa abantu abadala ukuba baqhube iikeyiki zombane ukusombulula iingxaki zabo zokuhamba. Ngaphandle kwam yenye yeemodeli zethu ezifakiwe, sinokujonga.Umthengi weCanton Fair
Ngoba itrayipi yombaneNgaba kufanelekile kubantu abadala? Ndicinga ukuba kukho izizathu ezi-3 ubuncinci. Okokuqala,itrayiti kukhuselekile. Kwisakhiwo sizinzile kunamavili amabini, kwaye sibeka isantya se-max nge-25 km / h, engakhawulezi konke konke kodwa ilungile kubantu abadala. Okwesibini, i-tricycle ikhululekile ngakumbi xa uqhuba. Sisebenzisa indawo ephezulu yokugcina isihlalo somqhubi nesihlalo sokukhwela. Akulula ukuba uzive udiniwe nokuba uqhuba iiyure. Okwesithathu, le tricycle inobukhulu obuncinci, ziinyawo ezi-8 ubude, zi-3.4 iinyawo ububanzi. Uyakuyithanda xa uqhuba kwisitrato esixineneyo.Kwi-Canton Fair ekwi-Intanethi
Njengoko sisazi, Imoto yeyona nto iphambili kwi imoto. Okuitrayiti Inemoto ene-60V1000W, sisebenzisa uphawu lomgca wokuqala, inentsebenzo yokuqalisa ityhubhu enkulu, impendulo ekhawulezayo yokuphendula, umthamo ogcweleyo, ingxolo ephantsi, ukusebenza ngokutyibilikayo, ubomi benkonzo ende. Amandla ayo encopho afikelela kuma-2200W, ebonelela ngesantya esingama-30km / h, anele ngabantu abadala ukuba baqhube.
Inxalenye yesibini ebalulekileyo ngumlawuli, umlawuli wethu unokusebenza ngokuguqukayo okuphezulu, akukho ukuqala kwe-jitter, umthamo omkhulu wokulawula, ukukhuselwa kwevolthi ephantsi. Inomsebenzi wokuzivavanya: ukuzijonga okunamandla kunye nokuzivavanya ngokwakho. Ngalo lonke ixesha umlawuli ekwimeko yamandla, iya kuyifumana ikhangelene nendawo enxulumene nayo, enje ngokujika isibambo, isibambo esiqhekezayo okanye olunye utshintsho lwangaphandle, njl njl. ukhuseleko lokukhwela.
Okwesithathu yitsimbi engasemva, sikhetha inkqubo yokubonelela esemgangathweni kazwelonke yokunciphisa okuphambili, kwaye inkqubo yokucima ubushushu isetyenziselwa isiqingatha seshafu. Iibhere zebanga le-P5 ziqinisekisa uzinzo lomgangatho wenkqubo yothumelo esizenzele yona, ityhubhu yedolo:φI-56mm, ubunzima buyi-3.5mm.Umthengi weCanton Fair
Ixesha lokuposa: Jun-22-2020
Indawo yeNdawo yeHengihai-Zongshen, uQeqsho noQehliso lwezobuChwepheshe indawo yeXuzhou, Jiangsu, China